Etu esi ewepu ozi olu na ekwentị gị | Akụkọ akụrụngwa
Etu esi ewepu ozi olu na ekwentị gị
Ozi olu bụ ngwá ọrụ nke ndị ọrụ niile na-etinye n'aka anyị, nke ndabara guzobere, na n'ọnọdụ ụfọdụ nwere ike ịba uru n'ezie n'ọtụtụ ọnọdụ na-enye anyị isi ọwụwa. Ma ọ nwere ike ịba uru n'ezie nye ndị niile n'ọtụtụ oge enweghị ike ịza oku, mana enweghị ike ịhapụ ihe ndị enyi, ezinụlọ ma ọ bụ ndị ahịa ga-agwa ha.
Ọ bụrụ n ’n’etiti ndị ọrụ ndị ozi olu na-eche, anyị nwere ike ịsị na ọ bụ nsogbu, taa anyị ga-akọwara gị n’isiokwu a. esi gbanyụọ ozi olu na anọ n’ime ndị isi ekwentị na-arụ ọrụ dị ka oroma, Vodafone, Movistar na Yoigo.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịmụ otu esi gbanyụọ ozi olu nke ngwaọrụ mkpanaka gị, ma mụtakwa ijikwa nhọrọ ndị ọrụ ahụ na-enye anyị maka ọrụ a, wepụ akwụkwọ na mkpịsị odee iji dee ma gụọ ya nke ọma.
1 Etu esi ewepu ozi olu na oroma
2 Etu esi ewepu ozi olu na Movistar
3 Esi ewepu ozi olu na Vodafone
4 Etu esi ewepu ozi olu na Yoigo
Etu esi ewepu ozi olu na oroma
OrangeDị ka ndị ọrụ ndị ọzọ, ọ na-eme ka ozi olu dị na ndabara na otu ọ ga - esi bụrụ nke ọzọ, ọ na - enye anyị ụzọ abụọ iji mebie ya. Nke mbụ n’ime ha bụ ịkpọ ndị ahịa ọrụ ha (1470) ma ọ bụ ime ya n’onwe anyị iji usoro anyị nwere ike ịchọta webụsaịtị ha na anyị ga-egosi gị n’okpuru;
Gbanyụọ ozi olu ozigbo site na ịpị ## 002 # na bọtịnụ oku
Ugbu a, anyị na-egosi gị ụfọdụ nhọrọ, n'ọnọdụ ụfọdụ na-atọ ụtọ, gbasara ozi olu;
Gbanyụọ igbe akwụkwọ ozi mgbe ị na-akpọ mmadụ: pịa # 67 # na bọtịnụ oku
Gbanyụọ igbe akwụkwọ ozi mgbe ekwentị na-apụ ma ọ bụ site na nso: ## 62 # na bọtịnụ oku
Gbanyụọ ozi olu mgbe ị naghị aza oku: ## 61 # na bọtịnụ oku
Etu esi ewepu ozi olu na Movistar
Movistar O nwere ike ịbụ onye ọrụ ekwentị na-enye anyị ọtụtụ nhọrọ metụtara ozi olu. Ọ ga - ekwe ka anyị rụọ ọrụ ya naanị n'ọnọdụ ụfọdụ ma hapụ ya ka agbanyụọ ya na ndị ọzọ, na - enwe ike iji nnukwu ngwa a.
Iji mezie ozi olu gị nke onwe gị ị nwere ike ime ya site na mpaghara ndị ahịa Movistar na o doro anya na anyị na-atụ aro anyị ebe ọ bụ na ị nwere ike iji nwayọ mee ya ma jiri nlezianya gụọ nhọrọ niile onye ọrụ nke Spanish na-enye anyị.
Nhọrọ nke abuo gabigara kpọọ 22537 ma họrọ otu n’ime nhọrọ ha n’enye anyị ma nke anyị kọwara n’okpuru;
Pịa 1 na igbe ozi ga-akwụsị ọrụ mgbe ị jụrụ oku
Pịa 2 na igbe ozi ga-akwụsị ọrụ mgbe ekwentị na-agwa ma ọ bụ jụ oku
Pịa 3 na igbe ozi ga-akwụsị ọrụ mgbe ị na-enweghị ike ịza oku
Pịa 4 na igbe akwụkwọ ozi ga-akwụsị ọrụ mgbe ekwentị kwụsịrị ma ọ bụ site na nso
Pịa 5 na ozi olu ga-enwe nkwarụ kpamkpam
Esi ewepu ozi olu na Vodafone
Ozi olu ahụ Vodafone Ọ na-adịghị nwere ọdịiche dị ukwuu na-akwanyere ndị ọzọ mobile rụọ na ọ na-enye anyị ụzọ abụọ ka deactivate ya, na ihe omume na anyị achọghị ka ọ nyeere.
Nke mbụ, ị nwere ike ịnweta My Vodafone iji nwee ike ijikwa ihe niile metụtara akara ekwentị gị, gụnyere ozi olu. Cheta na iji mezuo usoro ọ bụla, ị ga-edebanye aha tupu oge eruo.
Nhọrọ nke abụọ, ma ikekwe nke kachasị mma bụ ijikwa nhọrọ ozi olu gị bụ site na ịpị # 147 # wee pịa bọtịnụ oku na ekwentị gị. Also nwekwara nhọrọ ndị a dị;
Iji rụọ ọrụ igbe akwụkwọ ozi 30 sekọnd mgbe oku na-aga ị ga-pịa * 147 * 30 # na bọtịnụ oku
Iji rụọ ọrụ igbe akwụkwọ ozi dị na sekọnd 15 mgbe akpọchara oku, ọ bụrụ na agbanyụrụ ekwentị ma ọ bụ site na mkpuchi ị ga-akpọ * 147 * 1 # na bọtịnụ oku
Etu esi ewepu ozi olu na Yoigo
N’ikpeazụ anyị ga-enyocha etu esi ehichapụ ma ọ bụ kwụsị ọrụ igwe na-aza ihe n’igwe mkpanaka anyị nke dị Yoigo. Maka nke a, anyị nwere ike ime ya na My Yoigo ma ọ bụ site na iji akara akara ozi ndị a na ngwaọrụ mkpanaka gị.
* 67 * 556 # na igodo oku, wee * 62 * 556 # wee kpọọ igodo, wee * 61 * 556 # wee kpọọ igodo.
Yoigo nwere ike ịbụ onye ọrụ ekwentị na-enye anyị obere nhọrọ gbasara ozi olu, mana ịgwa eziokwu, imirikiti ndị ọrụ anaghị achọ ihe karịrị ịnwe ike ịgbalite ma kwụsị ozi olu na oge ọ bụ anyị ma ọ bụ na anyị achọghị ya .
N’ezie, n’ime ndị ọrụ niile anyị nwere ike ịkwụsị ozi olu nke akara ekwentị anyị n’oge ọ bụla ma megharịa ya mgbe ọ dị mkpa.
You nweela ike ịkwụsị ozi olu na ekwentị gị?. Gwa anyị otu ị si mee ya na oghere edebere maka ịza ajụjụ na post a ma ọ bụ site na netwọkụ mmekọrịta anyị nọ ugbu a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Etu esi ewepu ozi olu na ekwentị gị
Ọ baghị uru ụlọ ọrụ ị si, ha niile wepụrụ koodu ## 002 # 😉
Wepu igwe azịza Vodafone dijo
Daalụ maka inye koodu iji wepụ vodafone ozi olu ozi olu.
Zaghachi iji wepu igwe azịza Vodafone
Anyị na-enyocha igwefoto egwuregwu VicTsing, ngwaọrụ pụtara ìhè na ọnụahịa belatara
7 ihe ga-eme ka ị na-ahụ na ị kwesịrị ị na-agbanwe gị mobile